3 Ibhedi I-Allenft House, kwisixeko sase-Akright
UTravelNest unezimvo eziyi-5428 zezinye iindawo.
Yonwabela yonke into Akright city ,, Kakungulu Estate has to offer! Chitha iintsuku zakho ufumanisa iindawo ezikungqongileyo, njengoko zininzi izinto onokuzenza kufutshane. Eli likhaya elikude nekhaya, elikunika ufikelelo olukhethekileyo kwindlu iphela eyilelwe ukukuvumela ukuba uhlale njengendawo yasekhaya. Le ndlu inamagumbi okulala amathathu kunye neebhafu ezimbini, isuti enkulu enegumbi lokuhlambela / indlu yangasese ijonge iGadi kunye nenduli. Abanye ababini babelana ngegumbi lokuhlambela/yangasese. Indlu inekhitshi elivulekileyo elinesipheki segesi esi-6 / i-oveni enomphezulu we-granite counter. ejonge kwigumbi lokutyela ngokukhanya okuninzi kwendalo.
Igumbi lokuhlala lineesofa ezithandathu kunye neesofa ezimbini ezine-DSTV kunye ne-atrium enesofa emithathu yokuhlala kunye nomthombo we-waterfall kwaye indlu yonke ine-air conditioned ngokupheleleyo. Ngaphandle uya kufumana igadi ebiyelweyo enekhitshi yangaphandle exhotyiswe ngokupheleleyo enendawo yeBBQ eyilwe kwaye iphefumlelwe zizo zombini iindlela zokupheka zaseScandinavia kunye neAfrika.
Indlu inezinto ezininzi ezinomtsalane kubakhenkethi kumgama we-15-20 km. NjengePalm valley Ikhosi yeGalufa kunye neklabhu phakathi kwe-400-500m ukusuka kwindlu, iimarike zesidlo sangokuhlwa, udederhu lweevenkile lwase-Entebbe, i-Entebbe Zoo, iiGadi zeBotanical, iLake Victoria kunye neelwandle zalo ezimangalisayo. Munyonyo resort Kasubi Tombs ukukhankanya ezimbalwa.
Njengendlu yokuziphekela, uya kufumana yonke into oyifunayo ukuze uhlale ngokugqibeleleyo.
Ikhitshi linefriji, isitovu, ioveni, iketile, isikhenkcisi kunye nemicrowave.
Indlu yindawo egqibeleleyo yokuphumla kwaye ibonelela ngomabonwakude kunye nokufikelela kwi-intanethi.
Ilinen kunye neetawuli zonke zibandakanyiwe ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi ngakumbi.
- Ixesha lokungena liyiyo kwaye i-check-out iguquguquka ngokuxhomekeke kwi-flight yr. kodwa ukusuka 12.00 p.m khangela ind kwaye khangela ukusuka 10.00 a.m
- Ukutshaya akuvumelekanga.
- Kukho indawo yokupaka kwisiza ekhoyo kwipropathi.
Le ndlu yepropathi.ye yakhiwa ngo-2008 kwaye yayo
esanda kulungiswa ngo-2019, kunye nokukhanya kwendalo okubanzi, kunye nemigangatho efakwe iithayile ngokupheleleyo ukunika amaqondo obushushu abandayo afunekayo kwimozulu eshushu.
Le ndlu ikwi-Amelia shrub road plot 18 e-Akright Estate Kakungulu kwinduli yaseBwebajja. Imozulu intle ngokupholileyo kusasa nangokuhlwa kwaye iphakathi emini. Indawo ilunge kakhulu ukuphumla emva kosuku kwizitrato ezixakekileyo zaseKampala. Ukufikelela lula kwizithuthi zikawonke-wonke. Kwaye umtsalane woyilo oluninzi olwahlukeneyo lwezindlu. I-Estate ikwinduli enendawo yechibi iVictoria kunye nedolophu elikomkhulu. Apha unokuthatha uhambo lokuya kwibala legalufa elikumgama oyi-300m kude nendlu enezilwanyana ezifana neenkawu zokuseta xa udlala okanye uziphumlele eklabhu.
Umgcini wendlu uhlala esizeni kwindawo yamakhwenkwe kwaye ubonelela ngeenkonzo ezifunekayo, njengokucoca. Ngemali encinci angakulungiselela isidlo sakusasa kwaye akwenzele iwashing.
Unokusijonga kwakhona www.allentoft-vacations.com
Lo mbuki zindwendwe unezimvo eziyi-5 428 ngezinye indawo zokuhlala. Veza ezinye izimvo
Izimvo eziyi-5 428